रक्सी र दम: के म अल्बटेरोल र रक्सीको मिश्रण गर्न सक्छु? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी मनोरञ्जन भारी खेल कम्पनी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र समुदाय कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> रक्सी र दम: म अल्बटेरोल वा सिंगुलायर प्रयोग गर्दा पिउन सक्छु?
रक्सी र दम: म अल्बटेरोल वा सिंगुलायर प्रयोग गर्दा पिउन सक्छु?
कुनाको वरपरको छुट्टिहरू सहित, यदि तपाईं घरमै बस्नु भएको छ भने, त्यहाँ धेरै स्वादिष्ट व्यवहारहरू बाँधिनेछ — चार्कुटरि बोर्डहरू र क्रिसमस कुकीहरू खाने गेलर, र स्वादिलो ​​घूंटहरू जस्तै चकलेट बम र पिउन एग्ग्नोग!
तर यदि तपाइँ एक हो लाखौं वयस्कहरू अमेरिकामा दमको रोगले तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, के रक्सी र दमा सँगै जान्छन्? के तपाईं दमको औषधी लिन सक्नुहुन्छ र रक्सी पनि पिउन सक्नुहुन्छ? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
के तपाईं अल्बटेरोल र रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
दमको पीडित व्यक्तिसँग प्रायः उद्धार इनहेलर हुन्छ, जस्तै प्रोभेन्टिल एचएफए , प्रोएयर एचएफए , वा भेन्टोलिन एचएफए Generor जेनेरिक, जो हो अल्बुटेरोल एचएफए । जुनसुकै अल्बुटेरोल तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईले जान्न चाहानुहुन्छ कि यदि एल्बटेरोल र रक्सी सँगै जान्छ भने।
Valium र klonopin बीच के फरक छ?
राम्रो समाचार त्यो हो अल्बुटेरोल एचएफए को लागी जानकारी निर्धारित गर्दै रक्सीको साथ अन्तर्क्रिया सूचीबद्ध गर्दैन। को जानकारी तोक्दै को लागी Xopenex HFA (levalbuterol), अर्को लोकप्रिय उद्धार इनहेलर, पनि रक्सीको साथ अन्तर्क्रियाको सूचि छैन।
अन्य लोकप्रिय दम इनहेलरहरू स्टेरॉइड इनहेलरहरू र लामो अभिनय बीटा-एगोनिस्टहरूको संयोजनमा स्टेरोइडहरू समावेश गर्दछ। स्टेरोइड इनहेलरहरूका उदाहरणहरू समावेश छन् फ्लोभन्ट एचएफए , QVAR Redihaler , र पुल्मिकोर्ट फ्लेक्सैलर । सामयिक ककटेल खोज्नेहरूका लागि थप शुभ समाचार: यी दम ईन्हेलरहरू पनि रक्सीको साथ अन्तर्क्रिया गर्दैनन्।
के तपाई सिंगुलाइर र रक्सी मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
अब हामीले स्थापना गरिसक्यौं कि इनहेलर्ससँग रक्सीको साथ अन्तर्क्रिया हुँदैन, हामी लोकप्रिय अस्थमा औषधिमा फर्कौं सिंगुलाइर (montelukast)। तोकेको जानकारीका अनुसार त्यहाँ कुनै सि direct्गुलाइर र रक्सीको कुराकानी सूचीबद्ध छैन। जहाँसम्म, सिंगुलायर लिने व्यक्तिहरूमा कलेजो समस्या भएको छ। धेरै जसो अन्य जोखिम कारकहरू, जस्तै मदिरा प्रयोगको साथ व्यक्तिहरूमा देखा पर्‍यो। त्यसो भए, यदि तपाइँ लिनुहुन्छ सिंगुलायर वा यसको जेनेरिक (मोन्टेलुकास्ट) , तपाईं मात्र रक्सी पिउनु पर्छ यदि तपाइँको डाक्टरले यो अनुमोदन गर्छ । तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ, र यदि हो भने, कति सुरक्षित छ।
यो xanax लाई लुगा लगाउन कति समय लाग्छ?
इष्टतम रक्त शर्करा स्तर के हो?
दम छ भने के म पिउन सक्छु?
त्यसो भए, यदि तपाईंसँग छ भने दम , तपाईं केहि पिउन सक्नुहुन्छ, जस्तोसुकै औषधी लिनुहुन्छ? दुर्भाग्यवस, त्यहाँ बाहिर धेरै डाटा छैन। एउटा अध्ययन कसरी मदिराले दम, खोकी, टाउको दुख्ने, र खुजली सहित धेरै एलर्जी प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। यसले धेरैलाई दमको साथ पीडितलाई असर गर्न सक्छ जुन पिउँछ। दमको शिकार भएकाहरूका सर्वेक्षणमा %०% देखि% respond% उत्तरदाताहरूले वाइन, बियर, वा रक्सी पिए पछि दमको बिरामी परेको रिपोर्ट गरेका थिए। यो वाइनको कम्पोनेन्टहरू जस्तै हुन सक्छ हिस्टामाइन र सल्फाइट , जसले प्रतिक्रियाहरूलाई निम्त्याउन सक्छ। रक्सीको प्रतिक्रियाहरू बढी हुन्छन् AERD को साथ मानिसहरु (एस्पिरिन-बढि श्वासप्रश्वास रोग) मानिसहरू भन्दा एस्पिरिन सहन गर्न सक्ने मानिसहरू।
TO अध्ययनको समीक्षा मिश्रित नतीजा सम्भव छ भन्ने सुझाव दिन्छ - केही व्यक्तिले मद्यले दमलाई बिगार्छ भनेर पत्ता लगाउँछ, जबकि अरूले वास्तवमा सुधार देखेका छन्। जे होस्, अध्ययन लेखकहरूले सल्लाह दिन्छन् कि दमको रोग भएका व्यक्तिहरू अझै पनि रहनु पर्छमादक पेय पदार्थहरू वेवास्ता गर्नुहोस् किनभने उनीहरूले दमको उत्तेजना निम्त्याउँदछ।
किनभने सबै फरक छन्, रक्सीको सेवन र मात्राको बारेमा चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ। यदि तपाईंको दमा हल्का र राम्रोसँग नियन्त्रणमा छ भने, तपाईं कम मात्रामा मदिरा / मद्यपानको मजा लिन सक्नुहुनेछ। एक स्वस्थ छुट्टीको मौसम चियर्स!
तपाईको राज्य कती स्वस्थ छ?
मुटु रोगले एक बर्ष मा कति लाई मार्छ
म कसरी छिटो टायलेनोल पछि ibuprofen लिन सक्छु
चिसो हुँदा खाना खाने
ल्याक्टोज असहिष्णुता को मुख्य लक्षण हो
मेलाटोनिन को 10 मिलीग्राम धेरै छ